विश्व क्यान्सर दिवस मनाइँदै – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौ, माघ २१ । पछिल्लो समय नेपालमा क्यान्सर भयावह रुपमा देखापर्न थालेको छ ।
सार्क फेडरेसन अफ अंकोलोजिस्ट नेपालका अध्यक्ष वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद बरालले नेपालमा दैनिकरुपमा क्यान्सरका बिरामी बढीरहेको बताए । पछिल्लो समय नेपालमा पुरुषमा फोक्सो र महिलालाई पाठेघरको क्यान्सर अत्यधिक मात्रामा देखापर्ने गरेको जानकारी दिदै उहाँले सुरुमै क्यान्सर रोग पत्ता लगाउन सके क्यान्सरलाई जित्न सकिने बताए ।
पहिले–पहिले ‘क्यान्सर नो एनसर’ भन्ने चलन थियो, डा. बरालले भने, ‘अहिले क्यान्सर रोग लागेका धेरै बिरामीले क्यान्सरलाई जितेर सहज जीवनयापन गरिरहेका छन् ।’
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा। ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठले नेपालमा क्यान्सर रोग भयावह स्थितिमा देखा परीरहेको बताए । क्यान्सरको रोकथामका लागि नेपालमा राज्य र व्यक्ति दुवैको उत्तिकै भूमिका रहे पनि त्यो भूमीका निर्वाह गर्न नसकेको बताए । सरकारले क्यान्सर सम्बन्धी नीति ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले क्यान्सर लागेकालाई एक लाख रुपैयाँ दिएर क्यान्सर न्युनीकरण गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपालमा क्यान्सर सम्बन्धी उपचार हुने सबै अस्पतालमा फोक्सो, मुख , घाँटी, पाठेघर र स्तनको क्यान्सर बढिरहेको जानकारी दिदै क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. श्रेष्ठले क्यान्सरलाई रोकथाम गर्न राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुने बताए ।
अहिले नेपालमा प्रमुख क्यान्सरको रुपमा फोक्सो देखिएको छ । नेपालमा फोक्सो, पेट, आमासय, मुख, पाठेघरको मुख, प्रोस्टेट, स्तनको क्यान्सर बढी हुन्छ । त्यसमा पनि महिलामा पाठेघरको क्यान्सर र पुरूषमा फोक्सोको क्यान्सर सबैभन्दा बढी छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार गतवर्ष बहिरङ्ग सेवा ओपीडीमा ७७ हजार बिरामी आएका मध्ये तीनहजार चारसय १२ जनामा क्यान्सर देखिएको थियो ।
अस्पतालका निर्देशक डा. श्रेष्ठले २० जनासम्म नयाँ रोगी पत्ता लाग्ने गरेको बताए । उनले हप्तामा तीनदेखि पाँच जना क्यान्सरका बिरामीको अस्पतालमा मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा वर्सेनि ४० हजार नयाँ क्यान्सर रोगी थपिने चिकित्सकहरूको अनुमान छ ।
तर ती मध्ये मुस्किलले १० प्रतिशत मात्र उपचारका लागि अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन् । क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा।सुदीप श्रेष्ठले क्यान्सरलाई रोक्न जनचेतना बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले अहिले पनि चेतनाको अभाव र गरिवीका कारण ९० प्रतिशत क्यान्सर रोगी अस्पतालसम्म आउन नसकेको उनको भनाई छ ।
नेपालमा हाल जनसंख्याको आधारमा करीव ६५ हजार क्यान्सर रोगी छन् । विश्व स्वास्थ संगठनका अनुसार विश्वमा नसर्ने रोगको प्रकोप बढिरहेको छ ।
चिकित्सकले धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग नै क्यान्सर रोगको प्रमुख कारण रहेको बताउँदै आएका छन् । क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सुदीप श्रेष्ठले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट टाढा रहेमा क्यान्सरबाट हुने एकतिहाइ मृत्युलाई रोक्न सकिने बताए ।
श्रेष्ठले मानव शरिरमा करोडौं साना साना कोषिका हुने बताए । तीमध्ये कतिपय कोष दैनिक मर्ने र नयाँ बन्ने गर्दछन् । यसरी प्रत्येक दिन बन्ने नयाँ कोषिका मानिसको जीनद्वारा नियन्त्रित हुन्छन् ।
क्यान्सरका लक्षणहरूमा स्वर परिवर्तन हुनु, दुब्लाउदै जानु, शरीरमा गाँठागुठी वा गिर्खा देखिनु, भोक नलाग्नु, कोठी वा मुसाको आकार देखापर्नु, धकाई बढी लाग्नु, लामो समयसम्म घाउ निको नहुनु, लगातार खोकी लाग्नु, महिनावारी हंँदा रगत बढी जानु जस्ता लक्षण क्यान्सर रोगका लक्षण हुन् ।
नेपाल अवुूद रोग निवारण सस्थाका अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार श्रेष्ठले धूम्रपान त्याग्ने, जीवनशैली परिवर्तन, सन्तुलित खानपान र शारिरीक ब्यायाम भएमा क्यान्सरबाट बच्न सकिने बताए ।
यसैबीच सोमबार विश्व क्यान्सर दिवस मनाइँदै छ । हरेक वर्ष फेब्रुअरी ४ तमा विश्व क्यान्सर दिवस मनाउने गरिन्छ । म हुँ र म गर्छु भन्ने मुल नाराकासाथ यो वर्षको विश्व क्यान्सर दिवस मनाउन लागिएको हो । गोरखापत्रबाट
ट्याग्स: world cancer day